Abaphakeli bokudla kwezilwane kanye neFektri - China Abakhiqizi Bokudla Kwezilwane
Umshini we-Fellet Mill Umshini we-pellet feed ngumshini wokuphakelwa kokuphakelwa okucindezela ngqo izinto ezichotshoziwe zommbila, isidlo se-soya, utshani, utshani, ikhoba lelayisi, njll. Umshini wenziwa ngomshini wamandla, ibhokisi lamagiya, idrayivu shaft, ipuleti lokufa, i-roller roller, i-feed hopper, umsiki, kanye ne-hopper yokukhipha. Isetshenziswa kabanzi ezindaweni ezinkulu zasemanzini, eziphakathi nezincane, izitshalo zokucubungula okusanhlamvu, amapulazi emfuyo, amapulazi ezinkukhu, abalimi ngabanye namapulazi amancane naphakathi nendawo, i-farme ...
Imininingwane Yomkhiqizo Isigayo sefulawa singaqhutshwa yinjini kagesi noma injini kadizili. Iyakwazi ukugaya amakhambi ahlukahlukene, ilayisi, ummbila nezinye izinhlamvu. Amakhoba, amakhambi, amagxolo, amaqabunga, ukolweni, amakhoba erayisi, izikhwebu zommbila, utshani, okusanhlamvu, izimfanzi ezomisiwe, ufishi wezinhlanzi, izimila zasolwandle, imifino ephelelwe amanzi, i-hawthorn, izinongo, izinsuku, i-vinasse, amakhekhe, izinsalela zamazambane, itiye, ubhontshisi, Ukotini , utshale izimpande, iziqu, amaqabunga, izimbali, izithelo, amakhulu ezinhlobo zesikhunta esidliwayo nokunye okunzima ukukucubungula ...
Imininingwane Yomkhiqizo Umshini wokugaya isando ulungele izingongolo zommbila, izingongolo zikakolweni, izingongolo zikabhontshisi, izingquza zikakotini nezinye izigaxa zezitshalo ezahlukahlukene. Ingakwazi ukuxolela izinto zibe yizicucu ezincane. Umshini wokwenza ummbila wommbila ungathuthukisa izinga lokudla kwesilwane, isilinganiso sokudla nokugayeka komzimba. Ngasikhathi sinye, ingagaya noma iziphi izitshalo, ummbila, ukolweni, ubhontshisi wesoya, bese uyigaya ibe ufulawa, ohlanzekile futhi ohlanzekile, futhi ongadliwa. Umshini uyinhloso yomshini ombaxambili one-p enengqondo ...
Imininingwane Yomkhiqizo Umshini we-stalk stalk usetshenziselwa ukusika izingongolo zommbila oluhlaza (ezomile), utshani bukakolweni, utshani welayisi nezinye iziqu zezitshalo nedlelo. Izinto ezicutshungulwayo zilungele ukufuya izinkomo, izimvu, izinyamazane, amahhashi, njll., Futhi zingacubungula izingongolo zikakotini, amagatsha, amagxolo, njll., Ukuze zisetshenziswe ezimbonini ezinjengokukhiqizwa kwamandla kotshani, ukukhishwa kwe-ethanol, ukwenziwa kwamaphepha, nezinkuni amaphaneli asekelwe Ingafaniswa nenjini kadizili noma imoto kagesi njengamandla. Isimiso Esisebenzayo I str ...
Imininingwane Yomkhiqizo I-RYAGRI series thresher corn isetshenziswa kakhulu ekufuyeni izilwane, epulazini nasekusetshenzisweni komndeni. Isetshenziselwa ukubhula ummbila ngaphandle kokulimaza ama-corncobs futhi inezici zesakhiwo esizwakalayo, ukusebenza okuzinzile nokusebenza okulula. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, singanikeza ababhuli ngokusebenza kahle okuhlukile. Laba babhuli bangasebenza ngogandaganda oqhutshwa yi-PTO, futhi bangafanisa izinjini zikadizili noma izinjini. Inzuzo 1. Umshini ungasuswa futhi ...